Par Taratra sur 08/06/2016
Notapahin’ny birao maharitry ny Antenimierandoholona, omaly tetsy Anosy fa hatao amin’ny herinandro ny fifidianana ny solontenan’izy ireo eo anivon’ireo rafitra sasany. Anisan’izany ny eo anivon’ny HCC sy ny Fitsarana avo (HCJ) ary ny HCDDED. « Mbola banga ny toeranay amin’ireo. Mbola hivory anefa ny filoham-baomiera rahampitso (anio) hamaritra sy hanapaka ny ho lahadinika hatao », hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré.
Tonga mangingina. Efa eto an-tanindrazana, andro vitsivitsy ny Praiminisitra Mahafaly S. Rehefa niatrika ny fihaonana an-tampony Afrika Karaiba Pasifika (ACP) tany Nouvelle Guinée ny herinandro teo. Nambarany fa tapaka tamin’ny fivoriana ny hitadiavana fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombona antoka hafa, ankoatra ireo mpamatsy vola mahazatra any Eoropa. Tsiahivina fa ahitana firenena mpikambana 79 ny ACP ka anisan’ny ao anatin’izany i Madagsikara.
Nitohy tany Toliara, ny faran’ny herinandro teo, indray ny fanokafan’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ny orinasany. Nijery ifotony ny fomba hanarenana izany ny tenany sy ireo delegasiona notarihiny. Efa haolo tanteraka sy feno maloto ary nanariana fako ny Tiko any an-toerana. Hitohy any amin’ny faritra hafa izany raha efa voajery ny tao Fianarantsoa.